Hooyada dhashay mid ka mid ah gabdhihii la kufsaday oo ka warbixisay sida ay wax u dhaceen (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Hooyada dhashay mid ka mid ah gabdhihii la kufsaday oo ka warbixisay sida ay wax u dhaceen (DHAGEYSO)
Shukri C/laahi Sheekh C/raxmaan oo ah hooyada dhashay mid ka mid ah gabdhihii dhawaan lagu kufsaday deegaanka Galdogob ee gobolka Mudug ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay sidii uu ku dhacay kufsiga gabadheeda lagula kacay.
Shukri C/laahi Sheekh C/raxmaan oo wareysi siisay idaacadda VOA-da ayaa sheegtay in gabadheeda haatan si weyn looga haayo wadnaha, iyadoona arrinkaasi ku tilmaamtay inay ugu wacantahay toorey ay wiilashaasi geliyeen gabadheeda.
Hooyadaasi Soomaaliyeed ayaa sheegtay in lix nin ay gabadheeda si xun u jirdileen kadibna ay fara-xumeeyeen ilaa ay ka miyir beeshay, iyadoona sheegtay in arrinkaan ay galeen cuqaasha dhaqanka iyo culumada deegaanka.
Hooyo Shukri ayaa cuqaasha dhaqanka iyo culumada deegaanka ka codsatay in wiilashaasi dhibaatada u geystay gabadheeda la marsiiyo waxa uu sharciga islaamka ah ka qabo.
Ugu dambeyntii, hooyo Shukri ayaa sheegtay in kufsigaan uu dhacay 7-da bisha December ee sanadkii 2016-ka, iyadoona sidoo kale tilmaamtay in xaaladda caafimaad ee gabadheeda ay weli si aad ah u liidato, jirkeedane ay weli ku yaalaan dhaawacyadii soo gaaray.